ko htike's prosaic collection: မြန်မာသံရုံးသို့တစ်ခေါက်
Yes,I accept it.I am really sorry for losing good generations for our country.But really happy for them.It doesn't matter they change other citizenship cos their orgin is Burma and they keep our culture .It's better than staying and paying tax for the military regime.I don't want them to sacrify their lives under stupid regime.
သံရုံး ၀န်ထမ်းတွေ ကတော....လုံးဝ အလွဲသုံးစား လုပ်စားနေကြတာနီးစပ်တဲ. သူတော်တော်များများသိပါတယ်....
ကျွန်တော်တို.ပေးထားတဲ. ၀င်ငွေခွန်တွေ ဟာ မြန်မာပြည် အတွက်ဖြစ်သင်.ပါတယ်....တချိူ.သတင်းအမှန်လေးတချို.ကိုတင်ပြလိုက်ပါမယ်..
( ၁ ) နေ.စဉ် ၀င်ငွေခွန်ရရှိငွေ ( est: S$ 100,000 ) ကိုဘဏ်မှာအပ်ရတယ်...သံအမတ်နဲ.အတွင်းဝန် ၂ယောက်သွားရတယ်..ပြီးရင် MFA နဲ. တွင်း ( 1 ) ဆီကို ဖုန်းဆက်ပြီး သတင်းပို.ရတယ်။။။အဲဒါက နေ.စဉ် သံရုံး ရဲ.တရားဝင် ဘဏ်အပ်ရတဲ. လုပ်ငန်းတခုပါ....သင်ငွေခွန်သွင်းငွေဟာ အထက်က amount ထက်ပိုမပြကြပါဘူး.....ဒါပေမဲ. လက်တွေ. မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော.....
မြန်မာသံရုံး စာရေးကစပြီး သံအမတ်ထိ ရရှိတဲ.၀င်ငွေဟာ မနည်းလှပါဘူး....အတွင်းသတင်းအရ တချို. သံရုံးကအရာရှိများဟာ စကာံပူမှာ part time study လုပ်နေပြီး private properties ( condo, apartment ) တွေ hard cash နဲ.၀ယ်ဘို. နီးစပ်သူများကတဆင်. စုံစမ်းနေကြတာ ဟာ နှစ်ပြည်.လို.ပြန်ရရင် စကာံပူလာပြီး အခြေချကြဘို.ဘဲ.....ကျွန်တော်တို.ရဲ. အခွန်တွေနဲ. သူတို.က လောပန်လုပ်ကြမယ်....
အဲဒီ ငွေတွေဟာ ဘယ်က ရလဲဆိုတော...
( ၁ ) နေ.စဉ် ရရှိတဲ.၀င်ငွေခွန်ထဲက အပ်ရမဲ. target amount ထက် ပိုတဲ.ငွေတွေကို ဝေပုံကြခွဲဝေယူကြပါတယ်...
( ၂ ) သံရုံးနဲ.ပါတ်သက်တဲ. ထောက်ခံစာတွေ သက်တန်းတိုးကိစ္စတွေကို အရာရှိနေတဲ.အိမ်မှာ သွားလုပ်လို.ရပါတယ်...နီးစပ်ရာ မှတဆင်.ပေါ...အရာရှိလုပ်တဲ.သူက စာအုပ် ၁၀ အုပ်ပြည်.မှ လက်ခံတယ် တအုပ်ကို S$500 ယူပါတယ်...
တရားဝင်ပြေစာတော. မပေးပါဘူး...အခွန်ဆောင်စရာ မလိုဘဲ သက်တန်းတိုးလို.ရပါတယ်...
( ၃ )အခု နောက်ဆုံး သတင်းကတော. Orchard မှာ ရှိတဲ. စိန်နန်းတော် ကုမ္ပဏီကနေ online က အခွန်ဆောင်လို.ရတယ်ဆိုပြီး အကေါင်.တခုကို ဘဏ်က နေလွှဲခိုင်းနေတယ်ဆိုတဲ.သတင်းပြီးခဲ.တဲ. အပါတ်လောက်က ထွက်နေပါတယ်။။။
ပြည်တွင်းမှာတော. သာမန်ပြည်သူတွေဟာ ငတ်သတဲ.ငတ်နေကြပြီ....ခိုးစားကြမယ်....လုစားကြမယ်.....နောက်ဆုံး...အစားတခုအတွက် သတ်ကြဖြတ်ကြဖြစ်လာမယ်။။။
ပြည်ပမှာလည်း...အသက်နဲ.ရင်းနှီးပြီး ခက်ခက်ခဲခဲ ရှာလို.ရတဲ.ထဲက ၁၀% ကို တိုင်းပြည်အတွက် ဆိုပြီး တကယ်တော. အလွဲသုံးစား ဖြစ်နေကြတာ အတော်လေး စိတ်ပျက်ဘို.ကေါင်းပါတယ်....
အကြောင်းကြောင်. အလုပ်ခွင်ထဲမှာ သေဆုံးတာတို. မတရားအလုပ်ဖြူတ်ခံရတာတို. ရှိခဲ.ရင်လည်း..မြန်မာသံရုံး အနေနဲ. အလုပ်သမားဘက်က ရပ်တည်ခဲ.တာ တခုမှ မရှိခဲ.ပါဘူး...
အထက်က အခြေအနေ များနဲ.ဖြစ်စဉ်တွေ ကြည်.ချင်းအားဖြင်...တခြားနိုင်ငံသားခံကြတာတွေ..ဟာ မှားတယ်လို. မပြောနိုင်ပါဘူး....ကျွန်တော်နဲ.မိသားစုလဲ အခွန်ငွေလုံးဝ မပေးဘို.ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။။။
နိုင်ငံသားခံယူဘို.ကတော. ယနေ.အထိတော. မစဉ်းစားသေးပါဘူး...ဒါကလည်းကိုယ်.ယုံကြည်ချက်နဲ.ကိုပါ။
I am glad that they(people in myanmar embassy and sucker regime) can't suck my blood. I never pay themapenny. I would rather give them dog's shit. They will vomit inside out from their bodies before they die, believe me, show me any of them who died peacefully.